RW Abdiweli oo 200 oo kun dollar ugu deeqay Shirka Garbahaarey |
RW Abdiweli oo 200 oo kun dollar ugu deeqay Shirka Garbahaarey
cardura buy online, buy zithromax online. b
Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia waxaa xalay ku kulmay RW Somalia Cabdiweli sh Axmed iyo qaar ka mid ah Gudiga Farsamada Shirka Garbahaareey waxaana masuliyiintaasi ay ka wada hadleen arimo badan ooku saabsan shirka garabahaarey.
Intii uu kulankaasi socday Gudiga Farsamada waxaay RW Abdiweli uga warbixiyeen halka u marayo ababulka shirka iyo waliba qodobada shirka diiraada lagu saari doono iyo kuwa la filayo in ay ka soo baxaan.
RW Abdiweli ayaa dhankiisa sheegay in shirkaasi uu ka taageeri doono dhanka tasiilaadka hadi ay ahaan lahayd gadiidka cirka iyo qaraashaadka shirka lagu socodsinayo.
Gudiga Farsamada Shirka ayaa u mahad celiyay RW Abdiweli waxaayna sheegen in ay taarikhdu xusi doonta kaalinta uu shirka garbahaarey ka gaystay RW Abdiweli Sh Axmed oo asagu ka soo jeeda Gobolka lagu tashanayo ee Gedo.
Dad badan ayaa ku jahwararsana kaalinta uu RW Abdiweli ku leeyahay Shirka garbaharey ayado inta badan la aminsanaa in RW Abdiweli usan taagersanayn Shirka Garbahaareey balse hada ay soo baxday kalinta uu shirkaani ku leeyahay.
Dhanka kale RW Abdiweli ayaa Gudiga Farsamada u sheegay in uu gunaanadka shirka ay ka soo qayb gali doonan asaga iyo Wasiiro muhiim ah iyo xubno ka socda beesha calamka.